Taariikh Nololeedka Super Star Anil Kapoor Min Bilaaw Ilaa Dhamaad Oo Update Ah (+Sawiro) – Filimside.net
Taariikh Nololeedka Super Star Anil Kapoor Min Bilaaw Ilaa Dhamaad Oo Update Ah (+Sawiro)
December 24, 2018 Ali Aadan
Taariikhda: December 24, 2018
Super Star Anil Kapoor ayaa maanta u dabaal dagaya xafladiisa dhalasho maadama uu dhastay 24 Dec 1956 maantana uu jirsaday 62 sano.
Anil Kapoor waa atoore Hindi ah sidoo kalena filimada Qarash gareeyo wuxuuna ka tirsan yahay shirkada ugu weyn ee filimada Hindiya sameyso loona yaqaan Bollywood.
Anil Kapoor sidoo kalena dhawaanahan wuxuu ku biiray Hollywood-ka asigoo noqday jilaa caalami ah (International Star) wuxuuna ka qayb qaatay sameynta mashaariic caalami ah.
Anil Kapoor ku dhawaad 40-sano ayuu ku dhex jiraa fanka qaybihiisa kala duwan asigoo wiil yar ah ayuu Bollywood-ka kusoo biiray wixii markaas ka dambeeyay fanka baaqi ayuu ku ahaa.
Anil Kapoor wuxuu jilaayaasha asaagiisa iyo kuwa maantaba kaga duwan yahay inuu yahay atoore door walbo sameyn karo (Versatile Actor) inkastoo uu waayihii quruxda badnaa caanka ku ahaa sameynta aflaanta arimaha qoyska ka hadlaan.
Anil Kapoor wuxuu ka mid yahay jilaayaasha fara ku tiriska ah ee si joogto ah Bollywood-ka kaga dhex muuqdeen 30-sano ee ugu dambeesay wuxuuna ku amaanan yahay inuu yahay xidig u dhabar adeegay loolan walbo ee soo wajahay.
Anil Kapoor Iyo Bilawgii Noloshiisii:
Kapoor wuxuu ku dhashay xaafada Anil Kapoor ee ku taalo duleedka bariga magaalada Mumbia 24-kii December sanadii 1956.
Kapoor maanta waa 61-jir maqaam sare fanka ka gaaray balse xidigan noloshiisa gaarka ah waxay soo martay marxalado kala duwan.
Anil Kapoor qoyskiisa waxay ka kooban yihiin sedex wiil oo uu isaga ku jiro iyo gabar Anil waxaa ka weyn Boney Kapoor, halka uu ka yar yahay Sanjay Kapoor sidoo kalena waxaa la dhalatay gabar lagu magacaabo Reena Kapoor.
Anil Kapoor wuxuu waxbarashadiisa kusoo qaatay Our Lady of Perpetual Succour High School kadibna wuxuu dalacay College-ka lagu magacaabo St. Xavier’s College.
Anil Kapoor Iyo Sida Uu Fanka Kusoo Galay Iyo Aqoonsigii Uu Helay 80-kii:
Anil kapoor wuxuu ahaa wiil aad u fir fircoon sidoo kalena fahmadiisa wanaagsan tahay sidaa darteed asigoo 12-sano jiro ayuu muuqaal ku yeeshay filimkii Tu Payal Mein Geet, wuxuuna ku matalay Shashi Kapoor oo yar, inkastoo filimkan tiyaatarada laga daawanin hadana TV-yada ayaa xili dambe laga daawaday.
Anil Kapoor waxbarshadiisii ayuu iska sii watay wuxuuna si rasmi ah Bollywood-ka kaga mid noqday sanadii 1979 asigoo muuqaal kooban ku yeeshay filimkii Hamare Tumhare oo ay wada jileen Sanjeev Kumar, Raakhee, Amjad Khan iyo kuwo kale.
Markale Anil Kapoor wuxuu muuqaal marti ah ku yeeshay filimkii weynaa Shakti (1982) oo ay wada jileen Dilip Kumar iyo Amitabh Bachchan.
Balse xidigan si uu magac u yeesho dhankaas iyo Koonfur Hindiya aflaanta ay sameeyaan ayuu shaqo ka bilaabay wuxuuna magac weyn ku yeeshay filimadii hirgaleen ee kala ahaayeen Vamsa Vruksham (1980) waa filim Telugu ah iyo Pallavi Anupallavi (1983) waa filim Kannada ah.
Wixii markaas ka dambeeyay Anil Kapoor aqoonsigii uu u baahnaa ayuu helay waxaana la saxiixdeen shirkado Bollywood-ka caan ka ah.
Anil Kapoor filimkiisii ugu horeeyay ee uu atoore kowaad ka noqday kaasi oo ay Bollywood-ka sameeyay wuxuu ahaa Woh Saat Din (1983) waxaana Anil filimkan la jileen Padmini Kolhapure iyo Naseeruddin Shah wuxuuna noqday filimkan mid guuleestay.
Anil Kapoor oo cagaha dhulka la helay filimkii uu maqaam sare ku gaaray wuxuu ahaa midkii uu Director Yash Chopra sameeyay Mashaal (1984) waxaana la jilay Dilp Kumar weliba Anil Kapoor abaal marinta atoore caawiye oo ay shirkada Filmfare Awards bixiyo ayuu ku muteestay filimkan qaab jiliinkiisii wacnaa.
Kapoor marnaba ma hilmaami karo sanadii 1985 madaama uu sameeyay aflaan caalami ah oo ay ka mid ahaayeen Yudh iyo Saaheb.
Balse filimkiisii Meri Jung ee isla sanadii 1985 soo baxay ayaa u suura galiyay inuu markiisii ugu horeesay u tartamo abaal marinta atooraha ugu wanaagsan oo ay shirkada Filmfare Awards bixiso.
Anil Kapoor guusha ayuu saaxiib la noqday wuxuuna sanadii 1986 sameeyay filimkii sanadkaas ugu weynaa Karma waxaa Anil ku wehliyeen xidigaha kala ahaa Dilip Kumar, Nutan, Jackie Shroff, Anil Kapoor, Naseeruddin Shah, Sridevi iyo Anupam Kher.
Sidoo kalena Anil Kapoor isla sanadii 1986 wuxuu sameeyay labo filim oo Hit dhameestiran noqdeen Janbaaz oo ii Feroz Khan la jilay iyo Insaaf Ki Awaaz oo uu Rekha la sameeyay.
Anil Kapoor marnaba ma uusan ku fikirin sanadii 1987 filimkiisii Mr. India inuu ka mid noqon doono aflaanta ugu weyn ee ebid Bollywood-ka sameeyeen.
Mr. India wuxuu noqday Blockbuster weyn sidoo kalena filimkii ugu weynaa sanadii 1987 ayuu noqday waxaana Anil filimkan ku wehlisay Sridevi.
Anil Kapoor wuxuu noqday Super Star weyn oo Bollywood-ka kala wareegay awoodiisa Amitabh Bachchan taageerayaal farabadana wuu kasbaday xiligaas.
Sidaa darteed sanadii 1988 riyadiisii ayaa u rumowday madama uu ku guuleestay atooraha ugu wanaagsan Bollywood-ka oo ay shirkada Filmfare bixiso asigoo ku qaatay filimkii Blockbuster-ka weyn noqday Tezaab oo ay la jishay Madhuri Dixit.
Anil Kapoor waxay u noqotay dabiici inuu sanad walb Big Hit sameeyo sidaa darteed sanadii 1989 wuxuu la yimid filimkii Ram Lakhan oo ay Jackie Shroff isla jilee kaasi oo noqday filimka labaad ee ugu weynaa sanadii 1989.
Sidoo kalena isla sanadii 1989 wuxuu sameeyay Anil Kapoor aflaantii uu ku helay amaanta balaaran qaab jilinkiisii wacnaa waxaana ka mid ahaayeen Rakhwala, Parinda iyo Eeshwar wuxuuna ku muujiyay filimadan inuu door walbo sameyn karo.
Anil Kapoor Iyo Awoodiisii Bollywood-ka Halka Ay Gaartay 90-kii:
Anil Kapoor 80-kii wuxuu ku dhameestay jawi wacan iyo maqaam sare asigoo ku leh Bollywood-ka wuxuuna guda galay Super Star-kan 90-kii asigoo isku kalsoon taageerayaal badana leh.
Anil Kapoor sanadii 1990 waxay u ahayd sanad iska dhex dhexaad ah waayo filimadiisii Kishen Kanhaiya iyo Ghar Ho To Aisa waxay noqdeen Hit balse filimadiisii kale Awaargi, Jamai Raja iyo Jeevan ek Sangarsh dhamaantoodii wey guul dareesteen.
Sanadii 1990 Anil waxay u ahayd sanad dib u dhac waayo awoodiisii Bollywood-ka ee kaalinta 1-aad ku heestay sanado badan waxaa kala wareegay Sunny Deol.
Sidoo kale sanadii 1991 Anil Kapoor wuxuu sameeyay filimkii Yash Chopra iska lahaa Lamhe ee Sridevi la sameesay sheeko ahaan filimkan waa la amaanay balse ganacsi ahaan wuxu noqday mid siweyn u guul dareestay.
Sidoo kalena filimkiisii kale Benaam Badsha ee Anil sameeyay sanadii 1991 isagana wuxuu noqday mid aan siweyn u gadmay oo ganacsi ahaan liitay.
Laakiin Super Star-kan sanadii 1992 ayuu soo laba kacleeyay wuxuuna la yimid filimkii iskoorada badan dhigay Beta wuxuuna noqday filimkii ugu weynaa sanadkaas sidoo kalena Anil atooraha ugu wanaagsan Bollywood-ka ayuu mar labaad ku qaatay oo ay shirkada Filmfare Awards bixiso.
Anil sanadii 1993 markale dib u dhac ayuu la kulmay waayo filimkii Roop Ki Rani Choron Ka Raja ee iska lahaa walaalkiisii wuxuu noday mid bur buray madaama uu ahaa filim sanado badan meel iska yiilay waxaana meel looga dhacay awoodii iyo sharafkii Anil Kapoor!
Kaliya filimkii Laadla ee uu Sridevi la sameeyay ayaa noqday mid guuleestay sanadii 1994 sidoo kalena filimadiisii 1942: A Love Story, Mr. Azaad iyo kuwo kale ganacsi ahaan wey guul dareesteen.
Anil Kapoor hoos u dhac ayaa joogto u noqday wuxuuna sanadii 1995 la kulmay fashil weyn madaama filimkiisii Trimurti uu guul dareestay.
Xidigan sanadii 1996 ayuu guul uu u baahnaa helay waxaana u guuleestay filimkii Loafer ee uu Juhi Chawla la sameeyay laakiin guushiisii waxaa qariyay labadii guuldaro ee uu kala kulmay filimadiisii 1996 soo baxeen kuwaas oo kala ahaayeen Rajkumar iyo Mr. Bechara.
Dadka aflaanta ka faaloodaan ayaa baahiyeen in calanka Anil Kapoor uu dhacay sidoo kalena hada kadib loo dhiibi doonin wax film ah.
Anil Kapoor waa xidig karti badan wuxuuna aamusiyay dhamaan dadkii wax ka sheegi jireen madaama uu sanadii 1997 la yimid sedex filim oo Hit dhameestiran noqdeen Judaai, Virasat iyo Deewana Mastana waxana aflaantan gaareen guulo waa weyn Anil Kapoor-na boorka ayuu iska jafay.
Laakiin Anil Kapoor filimadiisii xigeen daadka ayaa qaaday oo uu sanadii 1998 sameeyay waxaana aflaantaas ka mid ahaayeen Gharwali Baharwali, Jhooth Bole Kauwa Kaate iyo Kabhi Na Kabhi, inkastoo filimka Gharwali Baharwali, guul dhex dhexaad ah gaaray hadana sidii laga filaayay ma noqonin.
Anil Kapoor ayaa sameeyay dadaal aan lasoo koobi karin wuxuuna sanadii 1999 la yimid aflaan kala duwan oo uu kusoo bandhigay wajiyo kala duwan.
Weliba filimadiisii 1999 waxay gaareen guulo waa weyn waxaana ka mid ahaa filimada uu Super Star-kan sameeyay , Biwi No.1 (1999), Hum Aapke Dil Mein Rehte Hain (1999) iyo Taal (1999).
Weliba Anil Kapoor abaal marinta atoore caawiyaha ugu wanaagsan oo ay shirkada Filmfare bixiso ayuu ku qaatay filimkii Taal wacdarahii uu ka dhigay.
Anil Kapoor Iyo Bilawgii Qarnigan Isbadalkii Uu La Yimid 2000 ilaa 2009
Super Star-kan bilawgii 2000 wuxuu la yimid filimkii Bulandi ee sheeko ahaan la wada amaanay sidoo kalena uu labo waji ku matalay balse filimkan ganacsi ahaan siweyn ayuu u guul dareestay.
Laakiin wax walbo wuxuu Anil ku hilmaamay guushii weyneed ee uu filimkiisii Hamara Dil Aapke Paas Hai gaaray sidoo kalena farxadiisa waxay 2000 sii laba jibaar matay markii uu abaal marinta National Film Awards atooraha ugu wanaagsna ku qaatay filimkiisii wacnaa Pukaar.
Sanadii 2001 xidigan wuxuu amaan badan ku muteestay filimkii weynaa Nayak weliba waxaa lagu tilmaamay inuu ka mid yahay aflaanta ugu wanaagsan ee uu ebid Anil Kapoor sameeyay sheeko ahaan, weliba filimkan waxaa qorshaha haatan ku jirto in qayb labaad laga sameeyo.
Laakiin Super Star-kan sanadihii 2002 ilaa 2004 aflaanta uu sameeyay dhanka Boxoffice-ka wax saameyn ah kuma yeelanin isaga hoos u dhac u gaar ah ayaa soo wajahay.
Anil Kapoor aflaantii ka guul dareesteen waxaa ka mid ah Badhaai Ho Badhaai (2002), Om Jai Jagadish (2002), Rishtey (2002), Armaan (2003), Calcutta Mail (2003) iyo Musafir (2004).
Kapoor sanadii 2005 ganaci ahaan aflaantiisa guulo wacan ayay gaareen sidoo bandhigyadii uu sameeyay siweyn ayaa gudaha Hindiya looga dareemay.
Filimkiisii kowaad sanadii 2005 wuxuu ahaa Bewafaa filimkan gudaha Hindiya guul weyn kama gaarin laakiin suuqyada caalamka ayuu Hit weyn ka noqday.
Anil filimkiisii labaad My Wife’s Murder asiga ayaa qarash gareeye ka ahaa filimkan waa mid guul dareestay balse xidigan qaab jilinkiisii si aan caadi ahayn ayaa loola cajabay.
Laakiin Anil Kapoor wuxuu sanadii 2005 Bollywood-ka ku qabsaday filimka Classic-ka noqday No Entry kaasi oo Super Hit noqday sidoo kalena filimkii ugu weynaa sanadii 2005 ayuu noqday.
Bartamihii qarnigan markii lasoo gaaray Anil Kapoor wuxuu bilaabay inuu aflaanta badankooda atoore caawiye ku matalo balse xidigan boos walbo ee la siiyo amaan balaaran ayuu ku heli jiray.
Anil Kapoor sanadii 2006 wuxuu la yimid labadii filim ee ganacsi ahaan guul dareesteen Humko Deewana Kar Gaye iyo Darna Zaroori Hai.
Sidoo kalena xidigan sanadii 2007 guuldaro ayuu ku af bilaabay madaama filimkiisii weyna ee xidigaha badan la isugu keenay Salaam-e-Ishq: A Tribute To Love uu noqday mid bur buray.
Laakiin Anil Kapoor wuxuu kusoo laba kacleeyay filimkii Super Hit-ka weyn noqday sidoo kalena macaashka badan laga helay Welcome weliba Anil doorkiisii shactirada si wacan ayaa loo amaanay.
Super Star-kan sanadii 2008 wuxuu u ahaa sanad isku qasan waayo filimadiisii Black & White, Tashan iyo Yuvvraaj ganacsi ahaan wey guul dareesteen halka filimkiisii kale Race uu guul weyn gaaray.
Balse Anil Kapoor 2008 waa sanadkii uu atoore caalami ah noqday madaama uu sameeyay filimkii weynaa Slumdog Millionaire wuxuuna ku qaatay abaal marin qiimo badan oo ay siisay shirkada caalamiga ah Screen Actors Guild Award.
Weliba filimka Slumdog Millionaire wuxuu daafaha caalamka kasoo xareeyay $352 million waxaana filimkan lagu qarash gareeyay $15 million taasi oo ka dhigan inuu ka mid yahay aflaanta caalamka macaashka ugu faraha badan laga helay!
Anil Kapoor sanadii 2009 wax filim ah ma sameynin waxaa ugu wacnaa inuu noqday atoore caalami ah oo ku mashquulay ka qayb galka xafladaha ay Hollywood-ka dhigtaan sidoo kalena magaciisa cirka ayuu galay.
Anil Kapoor Iyo Marka Uu Aflaan Caalami Ah Sameyntooda Ka Qayb Qaatay 2010 Ilaa Haatan
Sanadii 2010 Kapoor wuxuu ka qayb qaatay sameynta taxanaha caanka ah 24 ee Hollywood-ka lagu yaqaan wuxuuna doorkiisa ku helay amaan fara badan.
Sidoo kale xidigan sanadii 2010 waxaa usoo baxay filimkii atoorayaasha badan la isugu keenay No Problem ee uu qarash gareeyaha ka ahaa balse nasiib daro filimkan wuxuu noqday mid guul dareestay.
Anil Kapoor oo jilaa caalami ah noqday wuxuu sanadii 2011 la yimid filimkii Tom Cruise hogaamiyaha ka ahaa Mission: Impossible – Ghost Protocol wuxuuna Kapoor ku lahaa filimkan door caawiye oo kooban balse hadal heyn xoogan ayuu filimkan ku yeeshay xidigan.
Anil sanadii 2012 wuxuu Ajay Devgn kula midoobay filimkii Tezz balse filimkan sheeko ahaan iyo ganacsi ahaan wuxuu noqday mid ay dadka iska diideen.
Ruug cadaagan ayaa Bollywood-ka kusoo rogaal celiyay sanadii 2013 wuxuuna la yimid filimadii guulaha gaareen Race 2 iyo Shootout at Wadala sidoo kalena bandhigiisa labadan filim si wacan ayaa loo amaanay.
Anil Kapoor sanadii 2014 wax filim ah lama imaanin balse sanadkan 2015 wuxuu la yimdi labo filim oo saameyn ku yeesheen Bollywood-ka qaab jiliinka uu xidigan la yimid weliba filimkii Dil Dhadakne Do doorka aabonimo ee uu xidigan ku matalay si wacan ayaa loo amaanay.
Sidoo kalena isla sanadkii 2015 Anil waxaa usoo baxay filimkii weynaa Welcome Back kaasi oo guul wacan ka gaaray gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka.
Ugu dambeyn Anil sanadkii 2017 waxaa usoo baxay filmka madadaalada iyo arimaha qoyska ka hadlaayo ee Mubarakn waxuuna anil filmkaan ku jilaayey door caawiye ah halka Arjun Kapoor atoore ka aha waliba labi waji ku matalaayey.
Anil amaan iyo abaal marin ayuu ku muteystay doorkisa Kartar Singh ee filmkaan sanadkaan 2018 Anil waxaa usoo baxay 2 film kuwaaso kala ah Fanney Khan iyo Race 3 waxaana sanadka dambe 2019 u diyaarsan filmada kala ah Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga iyo Total Dhamaal.
Anil Kapoor Iyo Noloshiisa Gaarka Ah:
Anil Kapoor sanadii 1984 wuxuu guursaday gabadha lagu magacaabo Sunita Bhambhani Kapoor oo shaqadeeda ahayd xiligaas gabar sameyso ama diyaariso labiska ay atirishooyinka xirtaan marka ay filimada sameenayaan.
Anil iyo xaaskiisa Sunita Kapoor waxay isku dhaleen labo gabdhood iyo wiil, weliba gabadhooda curada ah Sonam Kapoor waa atirisho Bollywood-ka caan ka ah.
Halka gabadhooda kale Rhea Kapoor ay aflaanta qarash gareyo sidoo kalena dhinaca Fashion-ka iyo Model-ka sameyntiisa ayay caan ku tahay.
Anil Kapoor wiilkiisa Harshvardhan Kapoor sanadki hore usoo baxay filmka Mirziya kaaso guuldaro taariikhi ah kudhacday maadama filmkaan Disaster noqday ama burburay ganacsi ahaan.
Anil Kapoor Iyo Abaal Marinda Uu Ku Guulestay Ilaa Iyo Hada:
Nationa Film Award: Best Actor Pukar(2001) iyo Abaal marin qaas ah filmka ugu fiican Gandhi: My Father (2007) maadama uu maalgaliye ka ahaa.
Filmfare Award: 6 jeer ayuu ku guulestay 2 kamid ah atooraha ugu wanaagsan filmada kala ah Tezaab iyo Betaa halka 3 kale uu ku guulestay abaal marinta atoore caawiyaha ugu wanaagsan filmada kala ah Mashaal, Taal iyo Dil Dhadakne Do ugu dambeyn mida hartay waxaa lagu siiyay abaal marin qaas ah ama kaalinta labaad atoore shaqo adag qabtay bandhigiisa filmka Virasat.
IIFA Award: 5 jeer ayuu ku guulestay 2 atoore caawiyaha ugu wanaagsan ayuu ku qaatay filmada kala ah Taal iyo Dil Dhadakne Do midna shactiroolaha ugu wanaagsan filmka Biwi No.1 halka 2 kale lagu siiyay abaal marin qaas ah mudadii uu Bollywoodka kujiray.
Zee Cine Award: 3 jeer ayee gudoonsiisay 2 kamid ah waa abaal marinta atoore caawiyaha ugu wanaagsan filmada kala ah Taal iyo Mubarakan halka abaal marinta kale filmkiisa Gandhi: My Father ay siisay.
Waxaa Aqrisay 548